Ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ na-emepụta ihe igwe ojii dị elu dị elu ọnụ ala.. YiZheng
Na Onye na-achikota ikuku nke Cyclone ọ dị na iwepụ nke uzuzu na-abụghị nke viscous na nke na-abụghị nke fibrous, a na-eji ọtụtụ n'ime ha ewepụ ihe ndị ahụ dị n'elu 5 mu m, na ihe yiri nke multi-tube cyclone ájá nchịkọta nwere 80 ~ 85% nke arụmọrụ mwepụ ájá ahụ nke 3 mu m.
Kedu ihe bụ Cyclone Powder Dust Collector?
Cyclone Powder Coljá mkpoko bụ ụdị ihe eji ewepụ ájá. Onye na-achikota uzuzu nwere ikike ichikota nke uzuzu nke nwere uzuzu ya na otutu ihe di ya. Dị ka ịta nke ájá, a pụrụ iji ọkpụrụkpụ nke ájá mee ihe dị ka isi kpochapụ ájá ma ọ bụ wepụ otu ájá na-ewepu, maka gas na-ekpuchi gas na ikuku dị elu nke nwere ájá, a pụkwara ịnakọta ya ma megharịa ya.
Akụkụ ọ bụla nke ihe nchịkọta uzuzu nke cyclone nwere oke nha. Mgbanwe ọ bụla na nke a nwere ike imetụta arụmọrụ na nrụgide ọnwụ nke onye na-achịkọta uzuzu cyclone. Akara nke onye na-achịkọta ájá, nha nke ntinye ikuku na dayameta nke ọkpọkọ ikpochapu bụ isi ihe na-emetụta. Tụkwasị na nke ahụ, ụfọdụ ihe bara uru iji melite arụmọrụ iwepụ ájá, mana ha ga-eme ka ọnwụ mgbali elu, ya mere a ga-atụle nhazi nke ihe ọ bụla.
Kedu ihe ejiri Cyclone Powder Dust Collector mee maka？
Nke anyi Cyclone Powder Coljá mkpoko ọtụtụ-eji na nkà mmụta banyere ígwè, mgbatị, ụlọ ihe, chemical ụlọ ọrụ, ọka, ciment, mmanụ ala, ụlọ ọrụ ọkụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Enwere ike iji ya dị ka ihe eji arụ ọrụ iji gbakwunye akụrụngwa na-enweghị fibrous na mkpochapụ ájá.
Atụmatụ Cyclone orjá mkpoko
1.Enweghị akụkụ ọ bụla na-agagharị n'ime ikuku mkpoko ikuku. Mmezi dị mfe.
2. Mgbe ị na-emeso nnukwu ikuku ikuku, ọ na-adaba adaba maka ọtụtụ nkeji iji mee ihe n'otu aka ahụ, a gaghị emetụta nguzogide arụmọrụ.
3. separajá separator akụrụngwa cyclone ájá extractor nwere ike iguzogide elu okpomọkụ nke 600 ℃. Ọ bụrụ na ejiri ihe ndị pụrụ iche na-eguzogide okpomọkụ dị elu, ọ nwekwara ike iguzogide okpomọkụ dị elu.
4. Mgbe a kwakọtara ájá onye na-eji ihe mgbochi na-eguzogide ọgwụ, enwere ike iji ya mee ka ikuku na-ekpo ọkụ nke nwere ájá abrasive dị elu.
5. Ọ na-eme ka ịmegharị ájá bara uru.
Ọrụ & rụzi
Na Cyclone Powder Coljá mkpoko dị mfe na nhazi, dị mfe ịmepụta, wụnye, lekọta ma jikwaa.
(1) Anụ arụmọrụ parameters
Ngalaba na-arụ ọrụ nke onye na-achịkọta uzuzu cyclone gụnyere: ikuku ọsọ nke onye na-anakọta ájá, ọnọdụ okpomọkụ nke gas na-arụ ọrụ na ntinye ọnụ mmiri nke ikuku nwere ájá.
(2) Gbochie oke ikuku
Ozugbo ikuku ikuku na-ekpokọta ikuku na-agbapụta, ọ ga-emetụta mmetụta mwepụ uzuzu. Dị ka atụmatụ si kwuo, arụmọrụ mwepụ nke ájá ga-ebelata site na 5% mgbe nkwụsị ikuku na cone dị ala nke nchịkọta ájá bụ 1%; uzuzu wepu arụmọrụ ga-ebelata site 30% mgbe ikuku leakage bụ 5%.
(3) Gbochie iyi nke isi akụkụ
Ihe ndị na-emetụta iyi nke akụkụ ndị dị mkpa gụnyere ibu, ọsọ ọsọ ikuku, ihe ntụ, na akụkụ ndị a na-eyi gụnyere shei, cone na ntan.
(4) Zere imechi uzuzu na uzuzu uzuzu
Mkpokọta ihe na uzuzu nke onye na-achikota uzuzu nke ikuku cyclone na-aputa ihe n’akuku uzo ntaneti, nke abuo na-aputa n’ime oriri na ivu oku.
Ihe Ngosipụta vidiyo nke Cyclone Powder Dust
Nhọrọ Cyclone Powder Dust Collector Model
Anyị ga-chepụta Cyclone Powder Coljá mkpoko nke kwesịrị ekwesị nkọwa gị dị ka ihe nlereanya nke fatịlaịza ihicha igwe na n'ezie na-arụ ọrụ na ọnọdụ.
Nke gara aga: Highlọ ọrụ okpomọkụ dị elu arụ ọrụ Fan Fan
Osote: Pulverized Coal burner
Okwu Mmalite Gịnị bụ Vetikal Fatịlaịza igwekota igwe? Vetikal Fatịlaịza igwekota igwe bụ ihe dị mkpa na-agwakọta agwakọta na nhazi nke fatịlaịza. Ọ mejupụtara agwakọta cylinder, etiti, moto, reducer, rotary ogwe aka, edemede spade, ihicha akpụcha, wdg, na moto na nnyefe usoro na-ịtọ n'okpuru mixi ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Rotary Drum Compound Fatịlaịza Granulator Machine? Rotary Drum Compound Fatịlaịza Granulator bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi na ụlọ ọrụ fatịlaịza njikọ. Mainkpụrụ ọrụ kachasị arụ bụ ịmị mmiri mmiri. Site na mmiri ma ọ bụ uzuoku, a na-emeghachi fatịlaịza bụ isi na cyli ...
Rewghasa Extrusion Solid-mmiri mmiri separator
Okwu Mmalite Gịnị bụ ịghasa Extrusion Solid-mmiri mmiri separator? Scghasa Extrusion Solid-mmiri mmiri Separator bụ ọhụrụ n'ibu dewatering ngwá mepụtara site na-ezo aka dị iche iche elu dewatering akụrụngwa n'ụlọ na mba ọzọ na ijikọta na anyị onwe anyị R & D na n'ichepụta ahụmahụ. Scghasa Extrusion Solid-mmiri mmiri Separato ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Roll Extrusion Compound Fatịlaịza Granulator? The Roll Extrusion Onyinye Fatịlaịza Granulator igwe bụ a dryless granulation igwe na a dịtụ elu ihicha-free granulation akụrụngwa. Ọ nwere uru nke elu uzu, ezi uche imewe, kọmpat Ọdịdị, novelti na ịba uru, ala ume co ...